အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုတာဘာလဲ။ | Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအကြောင်းကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ရေးသားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျောင်းသားများအတွက်အခြေခံမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိစျေးကွက်များသို့ပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်အရေးကြီးသည်ဟုထင်ပါသည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိတ်ဝင်စားဖို့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မကြာသေးမီကအရှိန်အဟုန်မြှင့်နေသော်လည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများမရှိသည့်အချိန်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ ဒါပေမယ့်ဘလော့ဂ်တခုကိုစတင်တာထက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကပိုများတယ်။
အကြောင်းအရာစျေးကွက် ဖောက်သည်အသစ်များဝယ်ယူရန်၊ လက်ရှိဖောက်သည်များအားထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လက်ရှိဖောက်သည်ဆက်ဆံရေး၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တီထွင်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊
ကုမ္ပဏီတွေကိုသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကူညီပေးခဲ့ရသည်။ အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာများကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးကိုမောင်းနှင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးသောဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါဖြစ်ပျက်လာသောအခါငါအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုတဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ရှိပါတယ် ကြော်ငြာနှိုင်းယှဉ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ ကြော်ငြာသည်ငါးမျှားရန်ငါးမျှားမည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ငါးမျှားချိတ်ကိုရေထဲသို့ချလိုက်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုသည်မှာငါးရှာဖွေခြင်း၊ ငါးကိုက်သောအခါအကိုက်ခံရသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်သူတို့မကိုက်မီကြာမြင့်စွာလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာပါ ၀ င်သည်။ အကြောင်းအရာ - အကြောင်းအရာ၊ စာတိုပို့၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်၊ ဗီဒီယို၊ podcast၊ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင်၏ပရိသတ်သည်မည်သူဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သည့်နည်းစနစ်များကိုဆက်သွယ်သည်၊ ပရိသတ်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသိရှိရန်၊ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုသိရှိရန်နှင့်ထိုအလားအလာများသို့မဟုတ်သုံးစွဲသူများစားသုံးရန်အတွက်သင့်လျော်သောအခန်းဆက်နှင့်အမျိုးအစားများကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်၎င်းတို့ထံရောက်ရှိရန်သင်သုံးမည့်မျှဝေခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းများပါ ၀ င်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာသည်အကြောင်းအရာကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုကြော်ငြာခြင်းအဖြစ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဘာကြောင့် tweet၊ status update သို့မဟုတ် blog post ကဘာကြောင့်ဘာသာပြောင်းတာကိုမဖြစ်စေတာလဲဆိုတာကိုသူတို့နားမလည်ကြဘူး။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ချက်ချင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း (သို့) ရောင်းအားမြင့်တက်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ပရိသတ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန်အရှိန်အဟုန်နှင့်လမ်းညွှန်နှစ်မျိုးလုံးလိုအပ်သည်။ chumming လုပ်ခြင်းသည်ငါးမျှားခြင်းကဲ့သို့ပင်သင်နောက်လိုက်ရှိပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်အစာကျွေးရာနေရာများတစ်လျှောက်တွင်မြှင့်တင်ရန်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။
QuickSprout မှလူများသည်စိတ်ကူးကောင်းသည့်ရေးသားချက်တစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမျိုးအစားများ ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးအစားတိုင်းသို့မ ၀ င်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဖောက်သည် ၆ ခုကိုအာရုံစိုက်ချင်ပါသည်။ ပိုင်မီဒီယာ အရင်းမြစ်များ:
ဆောင်းပါးများ - တစ်စိတ်ကူးတည်ဆောက်ခြင်း အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာရှိသောမေးခွန်းများကိုဖြေ ဆို၍ လုပ်ငန်းအတွင်းအတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်မှုပေးသည့်အရည်အသွေးမြင့်ကျစ်လစ်သောဆောင်းပါးများသည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီမဆို၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ဘလော့ဂ်ကိုတစ်ကြိမ်တည်းသောမဟာဗျူဟာအဖြစ်သဘောထားလေ့ရှိသော်လည်း၎င်းသည်အမှန်တကယ်ထပ်တလဲလဲဝင်ငွေနှင့်အကျိုးစီးပွားမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ရောင်းရန်အတွက်သင်၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုနေ့စဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုရေးအတွက်စားစရာများကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။
infographics ရှုပ်ထွေးသောခေါင်းစဉ်ကိုယူပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးကောင်းမွန်သောသုတေသနပြုထားသောသတင်းအချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ကုန်များစွာနှင့်နည်းပညာများတွင်ကြည့်ရှု။ မျှဝေနိုင်သောခရီးဆောင်ပုံစံကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်ခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ DK New Media ဤမဟာဗျူဟာတွင်သုတေသန၊ တီထွင်၊ ဒီဇိုင်း၊ ဖြန့်ဝေမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက် ၁၀၀ ကျော်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ဖြင့်ဤမဟာဗျူဟာတွင် ဦး ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကိုအဓိကဖိုင်များကိုပြန်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ဂရပ်ဖစ်များကိုအခြားတင်ဆက်မှုများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများတွင်ပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Whitepapers infographics ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အခါ whitepapers ပြောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများသည်မကြာခဏစာဖတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ခြင်း၊ ဝေမျှခြင်းပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်ခေါင်းစဉ်သို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရေငုပ်ခြင်းကိုရယူရန်သူတို့၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုမကြာခဏရောင်းဝယ်ကြလိမ့်မည်။ whitepaper ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသူတစ် ဦး ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမကြာမီ ၀ ယ်ရန်အတွက်သုတေသနလုပ်နေသည်။ whitepaper ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်ပို့စ်တစ်ခုမှသတင်းအချက်အလက်များကိုခေါ်ဆိုရန်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသို့ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အလွန်အမင်းအကျိုးရှိသည်။
တင်ဆက် - ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခြင်း၊ အခွင့်အာဏာရှိခြင်းနှင့်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အပေါ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်အရောင်းအစည်းအဝေးများတွင်အကြောင်းအရာများကိုတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒီတင်ဆက်မှုတွေကို Slideshare လိုမျိုးအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်မယ်၊ အဲဒီနောက်သူတို့ကိုပို့စ်တွေနဲ့လူမှုမီဒီယာတွေကနေတစ်ဆင့်မျှဝေမယ်ဆိုရင်သင့်ရွယ်တူချင်းတွေဆီကနေတော်တော်လေးဂရုစိုက်စရာဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဗီဒီယိုများ - အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၏အကြောင်းအရာဗျူဟာအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မှာဗီဒီယိုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသည်စကားလုံးတစ်ထောင်ပြောပါကဗွီဒီယိုများသည်မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ အတွေးခေါင်းဆောင်မှု၊ အကြံဥာဏ်များ၊ ရှင်းပြသူများဗွီဒီယိုများ၊ ထောက်ခံစာဗီဒီယိုများ…အားလုံးသည်သင်၏ပရိသတ်နှင့်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးနေ့စဉ်နှင့်အမျှ ၀ ယ်လိုအားပိုမိုလိုအပ်နေသည်။ လူများသည်အခြားမည်သည့်နည်းလမ်းထက်မဆိုဗွီဒီယိုများကိုရှာဖွေလေ့ရှိသည်။
အီးမေးလ်လိပ်စာ - သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူထံပြန်ပို့ခြင်းသည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အကောင်းဆုံးသောအကျိုးရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သင့်ရဲ့အလားအလာများနှင့် client များအီးမေးလ်ပို့ခြင်း, သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများကသူတို့လိုအပ်သည့်အခါသင်ရောက်ရှိနေကြောင်းတန်ဖိုးနှင့်သတိပေးချက်နှစ်ခုလုံးပါရှိသည်။ ဤအခြားနည်းဗျူဟာများအားလုံးသည် ၀ ယ်ယူရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသောသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူတို့အားမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ထိုအချိန်တွင်သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုသူတို့လက်မှတ်ထိုးရန်သေချာစေလိုသည်။ အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာတိုင်းတွင်ရှိပြီးသားအသုံးပြုသူများကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့ပို့ဆောင်ရန်အီးမေးလ်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာရှိရမည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်ပထမဆုံးပြုလုပ်သောအကြောင်းအရာသည်ပြက္ခဒိန်၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမခြေလှမ်းသည်၎င်းတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး visit ည့်သည်၊ လူမှုမီဒီယာပရိတ်သတ်သို့မဟုတ်နောက်လိုက်သို့မဟုတ်အခြား visit ည့်သည်ကို ဦး ဆောင်သောမျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်မှတစ်ဆင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်ရန်၎င်းတို့၏လက်ရှိ site နှင့်အွန်လိုင်းအာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများရှာရန်မေးခွန်းအချို့ရှိပါသည်။
ရှိပါသလား ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်း စာဖတ်သူကိုတွန်းအားပေးနေသောအရာမှန်သမျှမှသင်လုပ်လိုသည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဆီသို့?
Is analytics သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအရင်းအမြစ်သို့ပြန်လည်တိုင်းတာရန်သေချာစေရန်စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားပါသလား။
အကြောင်းအရာများကိုလူမှုမီဒီယာတွင်အလွယ်တကူဝေမျှနိုင်အောင်ပြသထားသလား။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှသင်ရရှိသောချဲ့ထွင်မှုများသည်သင်၏လည်ပတ်မှုများ၊ အပြောင်းအလဲများနှင့်သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုကိုတဟုန်ထိုးတက်လာနိုင်သည်။
အကြောင်းအရာကိုလက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်စက်ဖြင့်သင့်လျော်စွာပြသနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏အသွားအလာ ၄၀% ကျော်သည်မိုဘိုင်းမှလာသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ထိုအခြေခံအုတ်မြစ်တည်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များအနိုင်ရသောအကြောင်းအရာများကိုသုတေသနပြုရန်၊ သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်မဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်သင်လျှော့ချရန်လိုအပ်သည့်အရှိန်အဟုန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်ကိုပြုစုရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ ခဲနှုန်း သင်၏တိုးမြှင့်နေဆဲ (CPL) အသံဝေစု (SOV)၊ ပြောင်းလဲမှုအရေအတွက်ကိုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏တိုးမြှင့်ခြင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါ အချိန်ပို။
အော်ဂဲနစ်ပါဝင်မှုဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်အဆင်ပြေရန်အချိန်ပိုယူနိုင်ပြီးသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း ပေးဆောင်ကြော်ငြာနှင့်မြှင့်တင်ရေး အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောမဟာဗျူဟာများကသင့်အားအမြောက်အများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရစေနိုင်သည်။ စမ်းသပ်နှင့်တိုင်းတာ သင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပါ၊
ဖောက်သည်များကမေးခွန်းများအားလုံး၏မိခင်။ အကြှနျုပျ၏နှိုင်းယှဉ်မှုကဒီ ... အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတစ်ခုပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာမည်မျှလိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းခြင်းသည်ပြိုင်ကားမောင်းသူအားမေးမြန်းခြင်းနှင့်တူသည် သူတို့အနိုင်ရဖို့ဘယ်လောက်နှေးကွေး။ အင်ဂျင်ညှိနိုင်တာကတာယာများလေ၊ တာယာများလေလေယာဉ်မောင်းသူပိုပါလေလေရလဒ်ကပိုကောင်းလေပဲ။
ပါဝင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုအနိုင်ယူနိုင်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်မှု၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုလိုအပ်သည်။ အကြောင်းအရာပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ပါ၊ ဝယ်သူခရီးစဉ်၏အဆင့်အားလုံးပါဝင်သောသတ်မှတ်ထားသောစာကြည့်တိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့လမ်းညွှန်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု၏ doozy! ဘတ်ဂျက်အနှံ့အပြားကိုပျံ့နှံ့ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး, မြှင့်တင်ရေးနှင့်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီများသည်စတင်ရန်။ ၎င်းသည်စျေးအလွန်ကြီးသည် (တစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာ) ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ PR နှင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိပဲသင်စတင်နိုင်သည်။
လအနည်းငယ်အတွင်းမှာသင်သည်အရှိန်အဟုန်နှင့်မောင်းနှင်မှုကိုစတင်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်အတွင်းသင်သည်သင်၏အစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝသတ်မှတ်ပြီးခဲတစ်ခဲအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုနားလည်နိုင်ရမည်။ ထို့နောက်သင်ဘတ်ဂျက်ကိုအကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မြှင့်တင်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတို့အကြားသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ခဲတစ်ခဲလျှင်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပိုမို ဦး ဆောင်လမ်းပြခြင်း (သို့) စကားဝိုင်းများပြောင်းလဲခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ပြိုင်ဘက်များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာကိုတစ်ပြိုင်တည်းညှိနှိုင်းနေကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းပါးသောကြောင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလွှမ်းမိုးသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်ပြိုင်ဘက်များလျှောက်ထားသောအရင်းအမြစ်များနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးသောဖောက်သည်များရှိသည်။ မဟာမဟာဗျူဟာသည်အမြဲတမ်းပြိုင်ဆိုင်မှုကိုညှစ်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Tags: blogging မဟာဗျူဟာအကြောင်းအရာပြက္ခဒိန်အကြောင်းအရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြောင်းအရာစျေးကွက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာအကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရေးဘာသာပြောင်းကော်ပိုရိတ် blogging မဟာဗျူဟာခဲနှုန်းအီးမေးလ်ကအီးမေးလ်နည်းဗျူဟာရှင်းပြဗီဒီယိုကျနော်တို့အကြောင်းအရာမည်မျှလိုအပ်ပါတယ်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများprတင်ပြနည်းဗျူဟာရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးquicksproutစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါအသံဝေစုslideshareအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမျိုးအစားများဗွီဒီယိုဗျူဟာဘာဖြစ်သလဲအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဘာလဲwhitepaper မဟာဗျူဟာ